Qorsheynta - Arbetsförmedlingen
Qorshaha. Waddadii aad ku gaari lahayd shaqo ama waxbarasho
Waraysiga baaritaanka kaddib waxaa kuu bilaaban doona qorshe laguu dejiyo.
Sidaan ayaan qorshahaas u dejineynnaa
Annaga ayaa qorshahaas ku la dejineynna. Waxaad isla arkeynnaa hawlaha aad qaban doonto si aad shaqo dhaqso ugu hesho. Tusaale barashada af-iswiidhishka, macluumaadka bulshada ama tababar shaqo.
Waxaad qorshahaas lagu salaynayaa baahidaada iyo waaya-aragnimadaada. Iyo sida shaqooyinka Iswiidhen u muuqdaan. Haddaba si qorshahaasi u noqdo mid waxtar leh waxaa muhiim ah inaad si firfircoon uga qaybqaadato.
Qorshahaasi wuxuu la soconayaa horumarka aad samayso
Waxaad ku siineynnaa dhiirrigelin iyo inaan kugu hagno waddada shaqada. Annaga oo ku caawineynna ayaan qorshahaaga la cusbooneysiineynnaa hadba horumarka aad samayso.
Hab fudud oo shaqo lagu raadsado
Qorshuhu wuxuu kuu fududeynayaa inaad shaqo raadsato maadaama aad og tahay waxa aad u baahan tahay si aad shaqo u hesho. Waxaad mobiilka kala soconeysaa qorshahaaga iyo dhammaan caawimaadaha aad hesho.
Hawlo baraarujin leh
Ujeeddada hawlaha meeleyntu waa in lagu siiyo baraarujin, waxbarasho iyo in laguu fududeeyo sidii aad dhaqso shaqo ugu heli lahayd oo bulshada uga mid noqon lahayd. Sii akhriso warbixin dheeraad ah oo ku saabsan hawlaha aad ka sameyneyso barnaamijka meeleynta.
Halkaan ayaad ka samayn kartaa barnaamijka meeleynta
Ha illaawin inaad soo gudbiso waxyaalaha aad soo qabato
Waxaad bil walba soo gudbineysaa warbixin qoraal ah oo ku saabsan waxyaalaha aad soo sameysey. Waxaad halkaan ka akhrisan kartaa warbixin ku saabsan sida aad sameyneyso.
Soo gudbi warbixinta waxyaalaha aad soo qabato